A night at the Newseum – ONA Student Newsroom
Audrey Rodriguez and Christian Monterrosa and Victoria Hoffman
Journalists view the Washington DC skyline from the upper level observation deck at the Newseum during the opening reception for ONA17. (ONA Newsroom) Oct. 5, 2017
Journalists arrived by the busload for the ONA17 opening reception.
Selfie time for Swara Salih and Steele Saunders, of the Steele Wars Podcast, during the opening night night reception for ONA17 at the Newseum. (Tori Hoffman / ONA17 Student Newsroom) Oct. 5, 2017
Journalists socialize during the opening night night reception for ONA17 at the Newseum. (Tori Hoffman / ONA17 Student Newsroom) Oct. 5, 2017
Conversation during the opening night night reception for ONA17 at the Newseum. (Tori Hoffman / ONA17 Student Newsroom) Oct. 5, 2017
A journalism ethics game draws a crowd during the ONA17 opening night reception at the Newseum. From left, Jon Dang, Patrick Slawinski, Dana Schieffer, Marianne Epstein, all from Gannett, and Jesse Ma of the South China Morning Post, play the game on an interactive table. (Christian Monterrosa/ONA 17 Student Newsroom) Oct.5, 2017
Journalists network during the opening night night reception for ONA17 at the Newseum. (Tori Hoffman / ONA17 Student Newsroom) Oct. 5, 2017
William Lauricella strolls through a gallery of Pulitzer Prize-winning photos during the opening night night reception for ONA17 at the Newseum. (Audrey Rodriguez / ONA17 Student Newsroom) Oct. 5, 2017
A stop to view Pulitzer Prize-winning photos during the opening night night reception for ONA17 at the Newseum. The image of Barack Obama making a speech during a rain storm is part of the 2009 Feature Photography Pulitzer coverage of the presidential campaign made by Damon Winter of The New York Times. (Tori Hoffman / ONA17 Student Newsroom) Oct. 5, 2017
Leaving the church to find myself
ONA17 Registration in 360